Xafiiska QM ee Somalia oo mar kale ugu baaqay in dib loo soo celiyo wada shaqeyntii ka… – Hagaag.com
Xafiiska QM ee Somalia oo mar kale ugu baaqay in dib loo soo celiyo wada shaqeyntii ka…
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa mar kale ugu baaqay dowladda federalka iyo dhamaan dowladdaha xubnaha ka ah iney dib u bilaabaan wada shaqayntoodii, sida lagu sheegay warbixin golaha ammaanka loo diray 15-kii bishaan November.
Qaramada Midoobay waxay sheegtay sii socoshada ismariwaaga siyaasadeed inuu caqabad weyn yahay oo uu halis gelineyo qorshayaashii lagu meel mariyay shirkii madasha Iskaashiga Soomaaliya ee dhacay 1dii Octobar ee sanadkaan.
“Waxaan dib u cusbooneysiinayaa baaqayga ku wajahan hogaamiyaasha dalka, si ay u soo nooleeyaan wadahadalkooda una fuliyaan ballanqaadyadoodii ku aadanaa xallinta khilaafka siyaasadeed, iyadoo loo marayo hab tanaasul ah iyo danaha dadka Soomaaliyeed.” ayaa lagu yidhi warbixinta.
Warbixinta waxaa lagu ammaanay dadaalada wacyigelinta ah ee dowladda Federaalku ka wado Galmudug iyo Koonfur Galbeed, laakiin waxaa loogu baaqay dhinacyada ay khusayso geeddi socodka doorashada Soomaaliya in ay si dhaqso ah ugu howlgalaan arrimaha Jubbaland iyadoo loo marayo tanaasul iyo rabshad la’aan.
Ugu dambayn Qaramada waxay soo dhaweysay ballanqaadka madaxweyne Farmaajo oo ah in la qabto doorashooyinka guud sanadka 2020 inkastoo ay walaac xoogan ka muujisay waqtiga la haysto.